स्वास्थ्यवस्था बिग्रदै गएका डा. केसीलाई तत्कालै अस्पताल लैजान चिकित्सकको सुझाव - ३ आश्विन २०७७, NepalTimes
स्वास्थ्यवस्था बिग्रदै गएका डा. केसीलाई तत्कालै अस्पताल लैजान चिकित्सकको सुझाव
३ आश्विन, जुम्ला ।
जुम्लामा चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि चिकित्सहरुले तत्कालै अस्पताल लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
डा. केसीले अनसन बसेको छैटौं दिन भएको छ । उनलाई २४ सै घण्टा नियमित मनिटर गर्न सकिने ठाउँमा यथाशीघ्र स्थानन्तर गर्नु पर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. प्रवीणकुमार गिरीले बताए ।